M/weynaha Puntland oo xil ka qaadis ku sameeyey Guddoomiyihii Gobolka Nugaal… – Hagaag.com
M/weynaha Puntland oo xil ka qaadis ku sameeyey Guddoomiyihii Gobolka Nugaal…
Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee Caasimada Puntland, ayaa sheegaya in madaxweyne C/Wali Maxamed Cali (Gaas) uu xil ka qaadis ku sameeyay Gudoomiyihii Gobolka Nugaal Cumar Faraweyne.
Gaas, ma sheegin sababta xil ka qaadista, balse waxa uu xilka u magacaabay C/Salaan Xasan Xirsi oo hore u soo noqday Duqa degmada Garoowe, xiligii uu Puntland maamulayay Madaxweynihii geeriyooday Cadde Muuse Xirsi.
Guddoomiyaha xil ka qaadista lagu sameeyay, waxaa xilkaasi loo magacaabay sanadii 2015, Isagoo xilka hayay Saddexdii sano ee u danbeysay.
Cumar C/llaahi Maxamed (Faraweyne), waxaa adeer u ah Madaxweynihii hore ee Puntland Senator C/raxmaan Faroole, Gudoomiyaha cusub, waxa uu noqonayaa midkii 4-aad ee uu Gaas soo magacaabo mudada uu maamulka Puntland hayo.
Gaas, ayaa maalmaha kooban ee xafiiska uga hartay, waxa uu sameynayaa xilal ka qaadis iyo magacaabis, taasoo Siyaasiyiinta qaar ay ku tilmaamayaan iney qeyb ka tahay dadaalada loogu sii diyaar garoobayo doorashada Puntland ka dhaceysa 8-da January.
Madaxweyne C/Wali Maxamed Cali (Gaas), xilka waxaa haatan uga harsan oo kaliya muddo seddax bilood ah, waxaana dadka ku dhowdhow ay sheegayaan inuu qeyb ka yahay musharixiinta kursiga u tartameysa, waloow aanu isaga wali ku dhawaaqin.